Herdị atom atom Rutherford. Ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe mmata Msdị atọmịk Thomson, nke weere elektrọn na-na a ghaghị ebubo ọkara, a elu ndị ọzọ nlereanya maara dị ka Rutherford atomic nlereanya. Ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka ọganihu ọhụrụ a maka sayensị bụ Ernest Rutherford. Amuru ya na abali iri-asato nke onwa asato, 20 ma nwua n’onwa iri 1871, 19. N’oge ndu ya, o nyere onyinye buru ibu na onwu na uwa nke sayensi n’ozuzu ya.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị atomic Rutherford.
1 Nnwale Akwụkwọ Akwụkwọ Gold
2 Mmechi nke nnwale ọla edo
3 Rutherford atomic nlereanya
4 Nnabata na njedebe nke usoro atomic Rutherford
Nnwale Akwụkwọ Akwụkwọ Gold
Oldkpụrụ ochie nke thomson kwuru na ndị electron nọ n'ụzọ dị mma. Na 1909, Ernest Rutherford, tinyere ndị enyemaka abụọ aha ha bụ Geiger na Marsden, mere nyocha a maara dị ka nnwale Gold Leaf ebe ha nwere ike inyocha nke ahụ. Thomson maara nke ọma "mkpụrụ vaịn pudding" ezighi ezi. Ma ọ bụ na nnwale ọhụrụ a nwere ike igosi na atọm nwere usoro nwere ụgwọ dị mma. Nnwale a ma ọ bụ nwere ike inye aka ịmaliteghachi nkwubi okwu ụfọdụ nke mechara bido dị ka akara ngosi atom nke Rutherford na 1911.
Nnwale a maara dị ka Leaf of Gold abụghị ihe pụrụ iche mana emere ha n’agbata 1909 na 1913. Maka nke a, ha jiri ya ụlọ akwụkwọ ahụike physics nke Mahadum Manchester. Nnwale ndị a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na enwere ike ịtọpụta nkwubi okwu ọhụrụ site na nsonaazụ ha, nke dugara n'ụdị atọmịk mgbanwe.
Nnwale a gụnyere ihe ndị a: mpempe akwụkwọ ọla edo dị naanị 100nm ọkpụrụkpụ ga-eji ọtụtụ mkpụrụ alpha mebie ya. Ihe alpha ndia bu na ion. Nke ahụ bụ, atọm ndị na - enweghị elektrọn, yabụ na ha nwere proton na neutron. Site na inwe neutron na proton, ngụkọta ụgwọ nke atọm dị mma. Nnwale a kachasị nwee ebumnuche nke ịkwado ma ụdị Thomson ọ dị mma. Ọ bụrụ na ihe nlereanya a ziri ezi, mkpụrụ akụkụ alpha ahụ gafere n'aka atọm ọla edo n'usoro kwụ ọtọ.
Iji mụọ mmebi nke mkpụrụ akụkụ alpha kpatara, a ga-etinye ihe nzacha zinc sulfide na gburugburu mma ọla edo. Nsonaazụ nke nnwale a bụ na a chọpụtara na ụfọdụ irighiri ike gafere site na mkpụrụ ọla edo nke mpempe akwụkwọ na akara kwụ ọtọ. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime mkpụrụ akụkụ alpha ndị a tụgharịrị na ntụpọ enweghị usoro.
Mmechi nke nnwale ọla edo
N'iburu eziokwu a, ọ gaghị ekwe omume ịkwado ihe atụ atọmịk gara aga. Ma ọ bụ na ụdị atọmịk ndị a gosipụtara na ekesara ụgwọ dị mma na atom na nke a ga - eme ka ọ dịkwuo mfe ịgafe ya ebe ọ bụ na ụgwọ ya agaghị adị ike n'oge ụfọdụ.
Nsonaazụ nnwale ọla edo a bụ ihe atụghị anya. Nke a mere ka Rutherford chee na atọm nwere etiti nwere ezigbo ụgwọ dị mma emere mgbe mkpụrụ akwụkwọ alpha gbalịa wepu ya ajụ site na etiti ihe owuwu. Iji guzobe ebe a pụrụ ịdabere na ya, a na-atụle ihe ndị ahụ n'ọtụtụ nke ndị gosipụtara na ndị na-abụghị. N'ihi nhọrọ a nke ahụ, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta nha nke oghere ahụ ma e jiri ya tụnyere orbit nke electrons ndị gbara ya gburugburu. A pụkwara ikwubi na ọtụtụ n'ime oghere atom bụ ihe efu.
Enwere ike ịhụ ya, ejiri ọla edo mee ihe ụfọdụ gbasara mkpụrụedemede alpha. Offọdụ n’ime ha hapụrụ naanị obere akụkụ. Nke a nyeere aka ikwubi na akwụghị ụgwọ ziri ezi nke atọm nhatanhị. Nke ahụ bụ, ụgwọ dị mma dị na atọm n'ụzọ gbadoro anya na obere oghere ohere.
Ole na ole mkpụrụedemede ahụ laghachiri azụ. Nke a ndiiche na-egosi dị ka ndị a kwuru ahụ nwere ike ịghaghachi. N’ihi echiche ndị a niile, e nwere ike iji echiche ndị ọhụrụ guzobe usoro atọmịk Rutherford.
Anyị ga-amụ ihe bụ ụkpụrụ nke usoro atomic Rutherford:
Nnabata na njedebe nke usoro atomic Rutherford
Dika aturu anya ya, ihe nlere ohuru ohuru nke uzo ohuru ohuru na sayensi. Ekele maka usoro atọm a, ọtụtụ ndị sayensị mechara nwee ike ịmụ ihe wee chọpụta ọnụọgụ electron nke ihe ọ bụla dị na tebụl oge. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịchọta ihe ọhụụ nke na-enyere aka ịkọwa ọrụ nke atọm n'ụzọ dị mfe.
Agbanyeghị, ụdị a nwekwara ụfọdụ mmachi na chinchi. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọganihu na ụwa nke physics, ha abụghị ndị zuru oke ma ọ bụ usoro zuru oke. Ma nke ahụ bụ dị ka iwu Newton si dị na akụkụ dị mkpa nke iwu Maxwell, ụdị a enweghị ike ịkọwa ihe ụfọdụ:
Ọ pụghị ịkọwa otú ebubo na-ezighị ezi si nwee ike ijikọ ọnụ na ntọala ahụ. Dabere na eletriki tibia, ebubo dị mma ga-agbagha ibe ya.
Esemokwu ọzọ dakwasịrị iwu bụ isi nke electrodynamics. Ọ bụrụ na a ga-atụle electrons nwere ụgwọ dị mma ka ọ tụgharịa gburugburu etiti ahụ, ha kwesịrị ịmị radieshon electromagnetic. Mgbe emitting radieshon a, a na-ewe ike maka electrons iji daa na ntọala ahụ. Ya mere, nke ahụ na striated atomic ụdị enweghị ike ịkọwa nkwụsi ike nke atọm.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị atọm atom nke Rutherford.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Rutherford atomic nlereanya